China Mineral Fiber Ceiling BC005 fekitori uye Vagadziri | Beihua
1. Yakanakisa yekushongedza maitiro.
2. Kwakanaka kupisa kupisa insulation kuita. Iyo inopisa mafambiro emaminerari ewaini anotora-inobata mapaneru ari mashoma, uye yakanaka yekuisa svumbunuro yezvinhu, iyo inogona kuita kuti mukamuri ridziyirwe munguva yechando uye inotonhorera muzhizha, uye kunyatso chengetedza simba kune vashandisi.
3. Kubata inzwi uye kuderedza ruzha. Iyo mikuru yakasviba yezvicherwa yakachekwa inonwa-inobata bhodhi ndeye Ultra-yakanaka mineral fur fiber fiber ine density ye 250-300Kg / m3. Nekudaro, ine hupfumi hwekupinda micropores, ayo anogona kunyatso bata mafungu einzwi uye kuderedza kutaridzika kwemafungidziro, nekudaro achivandudza zvemukati inzwi remhando uye kuderedza ruzha.
4. Kuchengetedza uye kudzivirira moto.
5. Green kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Iyo mineral furawa inonzwa-inobata bhodhi haina zvinhu zvinokuvadza kumuviri wemunhu.
6. Mhute-chiratidzo uye insured. Nekuti iyo mineral furanga inotora-inobata bhodhi ine nhamba yakakura ye micropores uye chaiyo nzvimbo nzvimbo ine yakakura, inogona kutora uye kusunungura mamorekuru emvura mumhepo uye kugadzirisa mukati memukati mweya unyoro.
7. Kutemwa kwakapusa uye kushambidzika kuri nyore. Iyo mineral wool inonzwa inobata bhodhi inogona kuiswa, kusungirirwa, kurongedzwa, uye kusungirirwa, uye inogona kutemwa neyakajairwa general banga, saka hapana ruzha panguva yekucheka. Iyo ine dzakasiyana siyana dzekukwirisa nzira senge dzekunamatira kubatisisa, kuisa kunamatira, yakavezwa furemu, yakavanzika chimiro, nezvimwewo, izvo zvinogona kusanganisa zvinoshongedza mhedzisiro yehumhizha dzakasiyana.
8. Wet process, pedza iyo rese process kuburikidza nekukwevera, Fourdrinier kuteedzera, kushaya mvura, kutsvedza, kuoma, kuyerera, kupuruzira, kupedza uye kumwe kuita.
9. Munguva yekufambisa yemaminerari emvere bhodhi, teerera kutendeka kwekutakura, kunyorova-uchapupu uye kunaya-chiratidzo, kudzivirira iyo bhodhi kubva zvinyorova, izvo zvinokanganisa kuiswa kwekuisa.
10. Iyo mineral furawa bhodhi inofanirwa kurerutswa zvishoma uye kusunungurwa panguva yekubata. Iyo bhodhi inofanira kuiswa pasi, kwete tese, kudzivirira kukuvara kwemakona.
Yepfuura: Mineral Fiber Ceiling BH002
Inotevera: Yakamiswa System White Ceiling Grid